ANKARIERA : Fiara roa notafihan’ny jiolahy mpanakan-dalana teny amin’ny RN5
Tsy honohono intsony. Tonga eny amin’ny lalam-pirenena fahadimy mampitohy an’i Toamasina sy Foulpointe ireo jiolahy mpanakan-dalana. 7 septembre 2017
Ny talata 5 septambra tamin’ny 2 ora maraina, dia fiara roa no nisy nanafika teo Ankariera tanàna kely tsy lavitra an’i Foulpointe. Raha ny fanazavana voaray dia fiara avy tany Soanierana-Ivongo ny iray raha avy tao Fenoarivo-Atsinanana kosa ny faharoa. Samy hihazo an’i Toamasina handeha hividy entana avokoa ireo fiara ireo. Teo amin’ny lalana ratsy be eo Ankariera no namely ireo olon-dratsy.
Tsy afaka mandeha mafy ireo fiara teo am-pandalovana ilay lalan-dratsy ka nanamora ny asan’ny mpanao ratsy. Ny angom-baovao no nahalalana fa nitondra basy ireto farany. Vokany, voaroba ny volabe. Ny fampitam-baovao kosa no nahalalana fa tsy nisy ny naratra na ny aina nafoy.
Rehefa azon’ireo olon-dratsy ny vola dia nandositra tany anaty ala izy ireo. Vola an-tapitrisany Ariary maro no lasa. Safotra tsy nahatsiaro tena ny ramatoa iray tompon’ny vola voaroba tao anatin’ilay fiara iray.
Tafaverina soa aman-tsara kosa ny ainy rehefa nahazo fitsaboana sahaza. Mitohy ny fikarohana ireo olon-dratsy.